Beaver သည်ကနေဒါ၏သင်္ကေတဖြစ်သည် Absolut ခရီးသွား
ဒံယလေက | | ကေနဒါ
အဆိုပါအညီ ကနေဒါအက်ဥပဒေအမျိုးသားသင်္ကေတဥပဒေကို ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင်ပြဌာန်းခဲ့ပြီး၎င်းကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးကြေငြာခဲ့သည် ကဗျာ (Castor canadensisကြိုက်တယ် ၏အချုပ်အခြာအာဏာ၏သင်္ကေတ ကနေဒါ.
မြောက်အမေရိကရှိမြစ်များနှင့်ကန်များတွင်ရေရှည်ဆုပ်ကိုင်ထားသည့်ဖော်ရွေသောကြွက်သည်တိုင်းပြည်၏အထင်ရှားဆုံးသောမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ချစ်မြတ်နိုးရဆုံးသူလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူ၏ဇာတ်ကြောင်းနှင့်ကနေဒါနှင့်အထူးဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။
El Castor canadensis အဖြစ်လူသိများသည် အမေရိကန် Beaver။ ဥရောပ Beaver သည်ခွဲခြားထားသည် (Castor ဖိုင်ဘာ) ၎င်း၏အနည်းငယ်ပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားနှင့်အများကြီးကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ပြားချပ်ချပ်သောအမြီး၏ပုံသဏ္toာန်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်မြောက်အမေရိကနိုင်ငံများတွင်အဆိုပါသတ္တဝါများ ၁၀-၁၅ သန်းခန့်ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ အများစုကအကြားဖြန့်ဝေနေကြသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကနေဒါလည်း၏မြောက်ဘက်အချို့အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ပေမယ့် မက္ကစီကို။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာကပင်အမဲလိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသော်လည်း (၎င်း၏သားမွေးသည်အလွန်တန်ဖိုးကြီးသည်) ၎င်းသည်မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသည့်မျိုးစိတ်များဟုမယူမှတ်ပါ။
1 ကနေဒါသမိုင်းအတွက် Beaver အဘိဓါန်
2 Polar Bear သည်ကနေဒါ၏သင်္ကေတအသစ်လော။
ကနေဒါသမိုင်းအတွက် Beaver အဘိဓါန်
ကဗျာဆရာသည်ကနေဒါလူမျိုးများအများဆုံးခွဲခြားသတ်မှတ်သောတိရိစ္ဆာန်များအနက်မှတစ် ဦး ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းများစွာရှိသည်။ တကယ်တော့ဒီတိရစ္ဆာန်အများအပြား၌တည်ရှိ၏ ယဉ်ကျေးမှုသရုပ် တိုင်းပြည်နှင့်တစ်လမ်းအတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်ခဲ့သည် မိမိအဇာတ်လမ်း၏ဇာတ်ကောင်.
၁၇ ရာစုနှစ်မှကိုလိုနီခေတ်တွင်ဖြစ်သည် သားမွေးကုန်သွယ်မှု (နှင့်သူတို့တွင် Beaver ၏ကြောင်း) အတွက်တစ် ဦး မြို့တော်အရေးပါမှုရှိခဲ့ပါတယ် ကနေဒါ၏စီးပွားရေး, လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ အမဲရှာဖွေရန်စီးပွားဖြစ်လေ့လာရေးခရီးများသည်ကျယ်ပြန့်သောမသိသောဒေသများကိုရှာဖွေရန်နှင့်လူသားအခြေချရာများစွာကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
Como အချစ် ကွိဘက်၏ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီးသည်ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအားတတ်နိုင်သလောက်ဆုံးဖြတ်ရန်အကူအညီတောင်းကြောင်းဤသမိုင်းကြောင်းအရမှတ်သားသင့်သည် ဘီယာအသားကိုစားပါ ဥပုသ်၌သောကြာနေ့။ ဗာတီကန်ဆရာဝန်များကဟုတ်ကဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာအစားအစာဥပဒေများအရ၎င်းကြွက်သည်၎င်း၏သက်တမ်းများစွာကိုရေတွင်သုံးပြီးငါးအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာပြီးနောက်ကနေဒါ ၅ ရာခိုင်နှုန်းဒင်္ဂါးများ၏ပြောင်းပြန်တွင်ဒီဘီဗားကိုသရုပ်ဖော်ခဲ့သည်
နောက်ပိုင်း ၁၈၄၉ ခုနှစ်တွင်ပဲပုပ်တင်သွင်းသူများကဤနိုင်ငံ၏စာပို့တံဆိပ်ခေါင်းများကိုပထမဆုံးအကြိမ်အလှဆင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ပင်သူ၏ပုံရိပ်သည်နီကယ်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်။
ပြည်နယ်များ၏တရားဝင်ဒိုင်းအပေါ် beaver ရှိပါတယ် နီနီတိုဘာ၊ y ဆက်စ်ခက်ချဝမ်အဖြစ်ကောင်းစွာ၏မြို့၌တည်၏ တိုရွန်တို; ၎င်းသည် Beaver သည်နိုင်ငံ၏စစ်တပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏ mascot လည်းဖြစ်သည် ကနေဒါစစ်ဘက်အင်ဂျင်နီယာများ နှင့်အထိမ်းအမှတ် Hudson ရဲ့ဂလားပင်လယ်အော်ကုမ္ပဏီ။ အဆိုပါ Beaver အဘိဓါန်ကိုလည်း၏တံဆိပ်ထဲမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာထင်ရှား။ , ကနေဒါ, တိုင်းပြည်အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးသတင်းစာတွေထဲကတစ်ခု။
ထိုအဖော်ရွေ Beaver အမည်ရှိသောမမေ့မလြော့ပါ Amik (Algonquian ဘာသာစကားတွင်ဘီဗာဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောစကားလုံး) သည်ရွေးချယ်ထားသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည် Montreal အိုလံပစ် 1976 en ။
ဤငြင်းခုံမှုများအားလုံးနှင့်အတူ Beaver သည်၎င်းပိုင်ကိုယ်ပိုင်ကနေဒါနိုင်ငံ၏တိရိစ္ဆာန်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သည်ကိုမည်သို့ငြင်းဆိုနိုင်သနည်း။ လူတိုင်းသိသာထင်ရှားသည့်အရာကိုနောက်ဆုံးတွင် ၁၉၇၅ တွင်တရားဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည် ကနေဒါအက်ဥပဒေအမျိုးသားသင်္ကေတ ပို့စ်ရဲ့အစမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့။
Polar Bear သည်ကနေဒါ၏သင်္ကေတအသစ်လော။
သို့သော်ကော့ဗ်သည်ကနေဒါ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သောတစ်ခုတည်းသောတိရိစ္ဆာန်မဟုတ်ပါ။ ထိုဂုဏ်အသရေကိုငြင်းခုံရန်ကြိုးစားသူအခြားသူများလည်းရှိသည် ဆတ် နှင့် ရှဥ့်အာတိတ်သတ္တဝါများကဲ့သို့သောတိရိစ္ဆာန်များ၊ beluga ဝေလငါးအဆိုပါ puffin သို့မဟုတ် ပိုလာဝက်ဝံ။
ထိုသူအပေါင်းတို့တို့တွင်, သာ ပိုလာဝက်ဝံ ကနေဒါနိုင်ငံ၏တိရိစ္ဆာန်သင်္ကေတဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဘီဗာဗာဂုဏ်ယူစွာငြင်းခုံနိုင်ခဲ့တယ်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ကနေဒါ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြသည်။
အဖြူရောင်ဝံကြီးများ (ဤအမှု၌လည်းဒေါ်လာ ၂ ဒင်္ဂါးပြားပေါ်လာတတ်သည်) သည်နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။ သူတို့သည် Labrador နှင့် Newfoundland ဒေသများ၏မြောက်ဘက်အခြမ်း၊ Manitoba, Québecနှင့် Ontario တို့တွင်ပင်နေထိုင်ကြသည်။ ဒါဟာအတိအကျအဲဒီမှာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ပိုလာဝက်ဝံပြည်နယ်ပန်းခြံ, Hudson ဂလားပင်လယ်အော်၏ကမ်းခြေနှင့်လမ်းဖြင့်လုံးဝမရနိုင်ပါ။
Polar Bear သည် Beaver ကိုကနေဒါ၏သင်္ကေတတိရိစ္ဆာန်အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ရာတွင်အောင်မြင်မည်လော။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအထက်လွှတ်တော်အမတ် နီကိုးလ် eaton သူက Polar Bear ကိုမွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်ခံယူဖို့သူတို့ရဲ့မဲပေးမှုအတွက်သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုအသည်းအသန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ သူမရောင့်ရဲသော်လည်းသူမခေါ်သည့်ဒီဘီဗာကိုစော်ကားရဲသည် သွားဘက်ဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်။ အဲဒီအစားသူကဒီအထက်လွှတ်တော်အမတ်အဆိုအရသူ့ကိုကနေဒါ၏ပြီးပြည့်စုံသောသင်္ကေတဖြစ်ခြင်းခံထိုက်သောအရည်အသွေးများ (အစွမ်းသတ္တိ၊ ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ ကျေးကျွန်နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာ) များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည့်ဝက်ဝံဖြူကိုချီးကျူးခဲ့သည်။
ကနေဒါသင်္ကေတသစ် (ဝက်ဝံဖြူ) ကိုကျူးလွန်ရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသောလူအများအပြားရှိသော်လည်းဘီဗာနှင့်မတူဘဲမျိုးသုဉ်းရန်ခြိမ်းခြောက်နေသောတိရိစ္ဆာန်များရှိသော်လည်း၎င်း၏အဆိုပြုချက်ကိုပယ်ချခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » Beaver သည်ကနေဒါနိုင်ငံ၏အမျိုးသားသတ္တဝါ